Kooxda Arsenal oo guul muhiim ah ka gaartay Manchester United +Sawiro – Balcad.com Teyteyleey
Kooxda Arsenal oo guul muhiim ah ka gaartay Manchester United +Sawiro
Ciyaartoyda kooxda Arsenal ayaa ciyaaray ciyaar ahayd guul ama geeri kulankii Emarites Stadium ee ay Manchester United guusha If you are still looking for your Meclizine at a lower price than on the most of the market, you’ve found it! Buy Meclizine only for $0.55 right here! kaga gaartay, waxayna Arsenal ogayd in xilli ciyaareedkeedu uu si rasmi ah u soo dhamaan lahaa haddii ay guul daro kala kulmi lahayd Man United, sidaa daraadeed kooxda Arsene Wenger waxay soo bandhigtay mid ka mid ah qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa mudooyinkii ugu dambeeyay.
Arsenal ayaa sare u qaatay fursada ay ugu soo bixi karto Champions Leaque-ga, balse wali shaqo wayn ayaa u taala, iyada oo waliba ay gacmaheeda wax ku jirin waxayna wali ku sii xidhnaan doontaa haddii ay Liverpool iyo Manchester City dhibco lumiyaan.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa noqday xidigii garoonka ugu fiicnaa wuxuuna nooc kasta oo dhibaato ah uu ku abuuray difaaca Manchester United, Alex Oxlade-Chamberlain ayaa ahaa xidigii Xhaka iyo Welbeck ka caawiyay labadii gool ee ay koodooda guusha ugu horseedeen. Wuxuuna sameeyay 2 fursad abuuristeed oo kale, 7 karoos, laba gambis iyo laba taakal taas oo guud ahaan qaab ciyaareedkiisa ka dhigtay midkii ugu fiicnaa.
Dhanka kale Manchester United waxaa kulankaasi ku fashilmay Juan Mata, Anthony Martial, iyo Wayne Rooney oo helay qiimayntii ugu xumayd ee kulankan gaar ahaan ciyaartoydii shaxaha labada kooxood ku soo bilawday.